ကျေးဇူးပြုပြီး နားဆင်ပါ။ ကမ္ဘာအကောင်းဆုံး ကစားသမား မက်ဒရစ်သွားမယ့်ခရီးမှာ ပါပါမယ်။ - Sports Home Time
ကျေးဇူးပြုပြီး နားဆင်ပါ။ ကမ္ဘာအကောင်းဆုံး ကစားသမား မက်ဒရစ်သွားမယ့်ခရီးမှာ ပါပါမယ်။
ချန်ပီယံလိဂ်ဗိုလ်လုပွဲအဖြစ် မက်ဒရစ်ကိုသွားမယ့် ခရီးမှာတော့ လီဗာပူးတိုက်စစ်မှူး ဖာမင်နိုပါမှာဖြစ်ကြောင်း မနေ့ကပဲ ယာဂင်ကလော့ပ်ဟာ အတည်ပြု ကြေညာလိုက်ပါတယ်။
ယာဂင်ကလော့ပ်က “ ဘော်ဘီ လေ့ကျင့်ရေး ဆင်းခဲ့ပါတယ်။ အရင်အပတ်က လေ့ကျင့်ရေးမှာ ပါခဲ့ပြီး အစစအရာရာ အဆင်ပြေနေပါတယ်။ မနက်ဖြန်မှာ ဆင်းနိုင်မလား ကြည့်ရပါမယ်။ သူ့ကို ကြည့်ရတာ အခြေအနေ ကောင်းပါတယ်။ ဖာမင်နိုက အဆင်ပြေမယ်ဆိုတာ သေချာပါတယ် ” လို့ ဖာမင်နိုရဲ့ ဒဏ်ရာအခြေအနေကို ထုတ်ပြောခဲ့တာ ဖြစ်တယ်။
ဒီသတင်းဟာ လီဗာပူးပရိသတ်တွေအတွက်တော့ သတင်းကောင်းလည်းဖြစ်တယ်။ မက်ဒရစ်မှာ ကြိုရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့ လီဗာပူးပရိသတ်တွေဟာ အသင်းရဲ့ ကျောနံပါတ်9တိုက်စစ်မှူးကို မျှော်လင့်နေကြကြောင်း ထုတ်ဖော်တဲ့အနေနဲ့ မက်ဒရစ်မြို့ မြို့လယ်ခေါင်မှာ ဖာမင်နိုသီချင်းကို သံပြိုင်သီဆိုပြီး တိုက်စစ်မှူးကို ထောက်ခံအားပေးနေကြောင်း ပြသထားပါတယ်။
ယာဂင်ကလော့ပ်ရဲ့ အတည်ပြုသတင်းကို ထုတ်ပြန်အပြီးမှာပဲ လီဗာပူး လေယာဉ်ကွင်းက အများဆိုင်ရာ သတိပေးမှုတွေ ထုတ်ပြန်တဲ့ အသံချဲ့စက်ကို အသုံးပြုပြီး လီဗာပူးပရိသတ် လေယာဉ်ရုံးဝန်ထမ်းက မက်ဒရစ်ကို ထွက်ခွာမယ့် လေယာဉ်ခရီးစဉ် ဧည့်သည်တွေအတွက် သတင်းပြန်ကြားမှုတစ်ခုကို လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။
“ ဂုဏ်သရေရှိ လူကြီးမင်းများခင်ဗျား။ ကျေးဇူးပြုပြီး နားဆင်ပေးကြပါ။ လီဗာပူးပရိသတ်တွေ မင်းတို့ကို သိစေချင်တာလေး တစ်ခုရှိတယ်။ ဖာမင်နိုက အဆင်ပြေပါတယ် ” လို့ ကြေညာပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါဝန်ထမ်းက လီဗာပူးပရိသတ်တွေ ဖာမင်နိုအတွက် ရေးစပ်ပေးထားတဲ့ သီချင်းထဲက စာပိုဒ်တစ်ပိုဒ်ကို ရွတ်ဆိုပြခဲ့တာဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ထုတ်ပြောမှုကို လီဗာပူးပရိသတ်တွေက ချက်ခြင်း နားလည်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါဖြစ်ရပ်ကို ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းလည်း ထွက်လာခဲ့ပြီး တစ်မြို့လုံးနီးပါး အသင်းကို ထောက်ခံနေမှုအပေါ် အသင်းပရိသတ်တွေ သဘောတွေ့နေကြပါတယ်။
♫♫ There’s something that the Kop want you to know
The best in the world, he’s Bobby Firmino.
Sí, señor. Give the ball to Bobby and he will score..♪♪
လီဗာပူးလေယာဉ်ရုံး မျှော်စင်ရဲ့ ထိပ်ဆုံးမှာတော့ လီဗာပူးအသင်းရဲ့ အလံတွေ အပြည့်ချိတ်ထားပြီး ကလပ်အသင်းကို အားပေးနေကြောင်း လေယာဉ်ရုံးက လီဗာပူးဝန်ထမ်းတွေက ပြသထားပါတယ်။ မာဆေးဆိုဒ်သားက အနီရောင်ပရိသတ်တွေ မျှော်လင့်နေတဲ့6ကြိမ်မြောက် ဆုဖလားကို အနိုင်ရဖို့ကတော့ ဇွန်လ2ရက်နေ့ မက်ဒရစ်မှာ ယာဂင်ကလော့ပ်ရဲ့ အသင်းဟာ စပါးနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
[Unicode] ခနျြပီယံလိဂျဗိုလျလုပှဲအဖွဈ မကျဒရဈကိုသှားမယျ့ ခရီးမှာတော့ လီဗာပူးတိုကျစဈမှူး ဖာမငျနိုပါမှာဖွဈကွောငျး မနကေ့ပဲ ယာဂငျကလော့ပျဟာ အတညျပွု ကွညောလိုကျပါတယျ။
ယာဂငျကလော့ပျက “ ဘျောဘီ လကေ့ငျြ့ရေး ဆငျးခဲ့ပါတယျ။ အရငျအပတျက လကေ့ငျြ့ရေးမှာ ပါခဲ့ပွီး အစစအရာရာ အဆငျပွနေပေါတယျ။ မနကျဖွနျမှာ ဆငျးနိုငျမလား ကွညျ့ရပါမယျ။ သူ့ကို ကွညျ့ရတာ အခွအေနေ ကောငျးပါတယျ။ ဖာမငျနိုက အဆငျပွမေယျဆိုတာ သခြောပါတယျ ” လို့ ဖာမငျနိုရဲ့ ဒဏျရာအခွအေနကေို ထုတျပွောခဲ့တာ ဖွဈတယျ။
ဒီသတငျးဟာ လီဗာပူးပရိသတျတှအေတှကျတော့ သတငျးကောငျးလညျးဖွဈတယျ။ မကျဒရဈမှာ ကွိုရောကျနပွေီဖွဈတဲ့ လီဗာပူးပရိသတျတှဟော အသငျးရဲ့ ကြောနံပါတျ9တိုကျစဈမှူးကို မြှျောလငျ့နကွေကွောငျး ထုတျဖျောတဲ့အနနေဲ့ မကျဒရဈမွို့ မွို့လယျခေါငျမှာ ဖာမငျနိုသီခငျြးကို သံပွိုငျသီဆိုပွီး တိုကျစဈမှူးကို ထောကျခံအားပေးနကွေောငျး ပွသထားပါတယျ။
ယာဂငျကလော့ပျရဲ့ အတညျပွုသတငျးကို ထုတျပွနျအပွီးမှာပဲ လီဗာပူး လယောဉျကှငျးက အမြားဆိုငျရာ သတိပေးမှုတှေ ထုတျပွနျတဲ့ အသံခြဲ့စကျကို အသုံးပွုပွီး လီဗာပူးပရိသတျ လယောဉျရုံးဝနျထမျးက မကျဒရဈကို ထှကျခှာမယျ့ လယောဉျခရီးစဉျ ဧညျ့သညျတှအေတှကျ သတငျးပွနျကွားမှုတဈခုကို လုပျပေးခဲ့ပါတယျ။
“ ဂုဏျသရရှေိ လူကွီးမငျးမြားခငျဗြား။ ကြေးဇူးပွုပွီး နားဆငျပေးကွပါ။ လီဗာပူးပရိသတျတှေ မငျးတို့ကို သိစခေငျြတာလေး တဈခုရှိတယျ။ ဖာမငျနိုက အဆငျပွပေါတယျ ” လို့ ကွညောပေးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
အဆိုပါဝနျထမျးက လီဗာပူးပရိသတျတှေ ဖာမငျနိုအတှကျ ရေးစပျပေးထားတဲ့ သီခငျြးထဲက စာပိုဒျတဈပိုဒျကို ရှတျဆိုပွခဲ့တာဖွဈပွီး သူ့ရဲ့ထုတျပွောမှုကို လီဗာပူးပရိသတျတှကေ ခကျြခွငျး နားလညျခဲ့ပါတယျ။ အဆိုပါဖွဈရပျကို ဗီဒီယိုမှတျတမျးလညျး ထှကျလာခဲ့ပွီး တဈမွို့လုံးနီးပါး အသငျးကို ထောကျခံနမှေုအပျေါ အသငျးပရိသတျတှေ သဘောတှနေ့ကွေပါတယျ။
လီဗာပူးလယောဉျရုံး မြှျောစငျရဲ့ ထိပျဆုံးမှာတော့ လီဗာပူးအသငျးရဲ့ အလံတှေ အပွညျ့ခြိတျထားပွီး ကလပျအသငျးကို အားပေးနကွေောငျး လယောဉျရုံးက လီဗာပူးဝနျထမျးတှကေ ပွသထားပါတယျ။ မာဆေးဆိုဒျသားက အနီရောငျပရိသတျတှေ မြှျောလငျ့နတေဲ့6ကွိမျမွောကျ ဆုဖလားကို အနိုငျရဖို့ကတော့ ဇှနျလ2ရကျနေ့ မကျဒရဈမှာ ယာဂငျကလော့ပျရဲ့ အသငျးဟာ စပါးနဲ့ ယှဉျပွိုငျသှားရမှာဖွဈပါတယျ။
ဘာစီလိုနာနဲ့ ပွဲအပြီးမှာ ချန်ပီယံလိဂ် ဗိုလ်လုပွဲရောက် လီဗာပူးအသင်းအတွက် ကြေကွဲဖွယ် မက်ဆေ့ပို့ခဲ့တဲ့ ကားရီးရက်